Download facebook video Than Zaw posted on 07/04/2017
Bride of Water God အပိုင်း ၁
So Ah ဆိုတဲ့ဆရာဝန်မလေးက ကောင်းကင်ဘုံကနေလူ့ပြည်ကိုဆင်းသက်လာတဲ့ Ha Baek ဆိုတဲ့ရေနတ်ဘုရားလေးကို ပေးဆပ် (ယဇ်ပူဇော်) ခံရပြီး Ha Baek ရဲ့ အလုပ်အကျွေးပြုရသူ (ကျွန်) ဖြစ်လာရင်း သူတို့နှစ်ဦးကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းကို Bride of the Water God ဇာတ်လမ်းလေးမှာ ဖေါ်ကြူးပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Joo Hyuk ရဲ့ ဇာတ်ရုပ် Ha Baek- “သူဟာ သွေးအေးတယ်၊ စတိုင်ကျတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုး”
Shin Se Kyung ရဲ့ဇာတ်ရုပ် – “So Ah ဟာ ဆေးရုံတစ်ရုံရဲ့ အာရုံကြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဌာနရဲ့ အကြီးအကဲတစ်ေယာက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း trauma ရထားတဲ့သူတစ်ယောက်.. နတ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ Ha Baek နဲ့ချစ်ကြိုးသွယ်တဲ့လူသားမိန်းကလေးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
Lim Ju Hwan ကတော့ Hoo Ye ဆိုတဲ့ ကြင်နာတတ်ပြီး ရိုးသားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက် Ha Baek ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ပေါ့ သူက So Ah နဲ့ အစမှာ အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိခဲ့ပြီး နောက်မှာ So-Ah ကို ချစ်မိသွားသူပါ
Krystal ကတော့ Hye-ra ဆိုတဲ့လူသားအနေနဲ့ လူ့ပြည် မှာနှစ်ပေါင်းရာကျော်နေထိုင်နေတဲ့ ရေထုကိုသန့်စင်အောင်စောင့်ရှောက်တဲ့နတ်ဘုရားမလေးပေါ့ ခုခေတ်မှာတော့ သူမရဲ့အလှတရားတွေကြောင့် နာမည်ကျော်မင်းသမီးအနေနဲ့ရပ်တည်နေသူပါ Hye-ra က Ha Baek ကိုတဖက်သတ်ချစ်နေတဲ့အတွက် So Ah ကိုကြည့်မရနေတဲ့သူပေါ့။
Gong Myung ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကောင်းကင်ဘုံနတ်ဘုရား Bi Ryum အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီး Hye-ra က Ha Baek မှ Ha Baek ဆိုတာသိနေတာတောင်မှ Hye-ra ကိုစွဲလမ်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ညွှန်းဖတ်ပွဲကို မတ်လတုန်းကကျင်းပခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာ ရိုက်ကူးရေးတွေစတင်လုပ်နေခဲ့တာ ခုထိရိုက်ကူးရေးလုပ်နေဆဲပါ ဒီဇာတ်လမ်းက အပြီးအစီးရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။
“Bride of The Water God ” ဇာတ်ကားကို tvN ရုပ်သံလိုင်းကနေ ခုလွှင့်နေတဲ့ “Circle” ဇာတ်ကားအပြီး လာမယ့် ဂျူလိုင် (၃) ရက်နေ့က စတင်လို့ အပတ်စဉ် တနင်္လာ/အင်္ဂါ နေ့ညတွေမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Review credited to : Nam Joo Hyuk Myanmar Fans
Translated by: Phyo Thant, Winnie Ngoon
[ Goldchannelmovie.net Link ]
May Charming 07/14/2017
May Wathan Htet
More videos from Than Zaw
Than Zaw posted on 09/24/2017
ဒေါက်တာသမားတော် အပိုင်း ၁၃
09/18/2017 at 06:15. Facebook
The King Is Not Easy
ကူးယူလိုပါက ice chinese series pag ကို #crd ပေးပါ
#crd ice chinese series pag
223 likes - 36 comments
Knan Si Lay 09/18/2017 at 06:52
09/18/2017 at 06:05. Facebook
Ohmmar Zaw 09/18/2017 at 07:24
09/18/2017 at 05:56. Facebook
May Zin Myo Aung 09/18/2017 at 06:47
Phoo Thazin Myint
09/18/2017 at 05:46. Facebook
You Call It Passion (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်းသား Jung Jae‑young မင်းသမီး Park Bo‑young တို့ပါဝင်ထားပြီး အပန်းဖြေရင်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
File Size…(850MB) and (320MB)
Quality…BluRay Rip 720p
Translated by Missy
Phaw Shee Wah 09/12/2017
Than Zaw posted on 09/07/2017
Korea Drama TKL
Hospital Ship အပိုင်း ၅ တ​စောင်းfan ပါ😝 Crd-one star
Than Zaw posted on 09/03/2017
တေးသံစဉ် သဘင် အနုပညာ ဖျော်ဖြေရေး
"သံစဉ်စာသား ဆရာဦးနွေထိန်ဝင်း"အဆိုတော် အန်တီမေရွက်ဝါ သီဆိုသော" အိုးစားဖက်" သီချင်းလေး ..ညီမလေး ဒီသီချင်းဆိုပြတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားမိဘပြည်သူနဲ့တကွ ညီငယ် ညီမငယ်လေးတွေကိုယ်စား အရမ်းခံစားရတယ် တေးသံစဉ် page က ကိုကြီးတွေ မျက်ရည်မခိုင်ဘူးဗျ......ကံကောင်းခြင်းတွေ အမြန်ဆုံးဖြစ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်း...
Than Zaw posted on 08/31/2017
Reunited world အပိုင်း ၂၅ + ၂၆ Review တစ်နှစ်တည်းမှာပဲ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ ၁၂ နှစ်ကြာကွဲကွာခဲ့ပြီး ထူးဆန်းစွာဖြင့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တစ်နေရာစီမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ကြပါတယ်။ Sung Hae Sung (Yeo Jin Goo) ဟာ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆန်းကြယ်စွာဖြင့် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အချိန် ၁၂ နှစ်ကြာပြီး...
Than Zaw posted on 08/29/2017
School ep13 Crd#FOF
Than Zaw posted on 08/26/2017
School 12 Mmsub Crd FoF
Tracy Liancing 08/29/2017
Than Zaw posted on 08/23/2017
School 2017 အပိုင်း (၁၁) မြန်မာစာတန်းထိုး #family_of_film #kdramaseries
Than Zaw posted on 08/16/2017
School ep 10 crd #FOF